Rabshado ka Dhaca Caleema Saarka Biden Oo laga Digay | Gaaroodi News
Rabshado ka Dhaca Caleema Saarka Biden Oo laga Digay
Ammaanka dhismaha Capitol ayaa la adkeeyay
Waa maxay dibadbaxyada dheeraadka ah ee la qorsheynayo?
Sidee ayaa loo xoojin doonaa ammaanka caleema saarka?
Waxay sidoo kale dadka Ameerikaanka ah ka codsatay inay ka fogaadaan u safridda Washington DC si ay xafladda uga qeyb galaan. Biden ayaa shalay sheegay in qaar ka mid ah sanatarrada uu kala hadlay tallaabooyinkooda xil ka qaadista Donald Trump
Halkee ayay marayaan dadaalladii ugu dambeeyay ee mooshinka xil ka qaadista?
Digniinaha ku saabsan rabshadaha dheeraadka ah ee laga baqayo inay sameeyaan kooxaha Trump taabacsan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay socdaan dadaallo mooshin xil ka qaadis ah looga gudbinayo madaxweynaha, iyadoo lagu eedeynayo doorkii uu ku lahaa weerarkii uu dhiiggu ku daatay ee ka dhacay dhismaha Capitol.
Qaraarkan oo ay shalay gudbiyeen Aqalka Wakiillada ayaa wuxuu Mr Trump ku eedeynayaa kicin, iyadoo intii lagu guda jiray isu soo bax uu Mr Trump ku sheegay isagoo aan wax caddeymo ah bixin in doorashada laga “xaday” isaga.
Dimuqraaddiyiinta ayaa sheegay in qaraarkan cod loo qaadayo berri haddii uusan madaxweyne ku xigeenka Mike Pence xilka ka qaadin Mr Trump isaga oo adeegsanaya dastuurka.
Mr Trump wax hadal ah lagama hayo tan iyo intii Jimcihii laga mamnuucay dhowr baraha bulshada ah, oo uu ka mid yahay Twitter-ka